Sidee files waa laga saaray kaarka SD?
Waxaa jira sababo badan oo ka dambeeya su'aasha sakhiray iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in inta badan xaaladood oo tirtirka file waa sabab u ahaa xaqiiqada ah in qofka macaamiisha ah ayaa qaaday tallaabooyin ammaan ku filan ama ayaa xaqiijiyey in furayaasha yihiin cadaadisay hab aan fiicnayn si arrinta dhacdaa. Si loo hubiyo in xalka ugu wanaagsan in la siiyo user ee arrintan la xiriira waxaa marka hore lagula talinayaa in ay hubiyaan in user waa in u tagto sababaha tirtirka faylka sida oo ahaa sabab kasta uu leeyahay Qaraarka gaar ah ay tahay in la fuliyo si ay u sameeyaan hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyey arrintan la xiriira marka la eego kabashada xogta iyo dib u soo celinta.
Waa arrinta ugu horrayn waxa weeyi keena tirtirka ee xogta. Riixayo Shift + Del muhiim ah iyada oo aan wax gurmad ah u keenaysaa in arrintan oo user ugu danbeyntii xanuunka badan oo arrintan la xiriira. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in user waa in aad u hesho gobol ka mid ah qalab tahay dib u soo kabashada si loo hubiyo in xaalada ayaa ah mid niyad jabka sida ugu dhakhsaha badan ay dhacdo. Machadka SANS ayaa waxaa loo arkaa mid ka mid ah arrimaha ugu weyn ee jeer oo dhan burburisay nidaamka si weyn u kordhin iyo sidoo kale sababa khasaare fara badan, si ay hawlaha maalinlaha ah ee ganacsiga kuwaas oo ay dhici ay sabab u tahay falkan aan ula kac ahayn.
Arrinta la kaarka oo sababa in ay si cillad iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user ee xanuunka si xun arrintan la xiriira. Marka ay timaado in qalad farsamo ka dibna waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in saaraha waa mid ka mid ah waa inuu kan la eedeeyay sida imtixaanka ee kaarka aan nayl la bilaabay suuqa ka hor oo sidaas daraaddeed Dufcaddii oo dhan kaararka qaybiyey sameeyo muujinayaa doonaa arin isku mid ah.
Ma files tirtiray recoverable?
Meesha ugu horeysay ka dib markii tirtirka file waa bin recycle iyo iyadoo la isticmaalayo qalab nidaamka dhaqanka file waa la soo saari karaa iyada oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in files hal mar u soo diray inay bin recycle uusan sii meeshoodii asalka iyo sabab la mid ah waxa ay ka soo ururiyey meel caadi ah in la sameeyo geeddi-socodka tirtirka fudud. Marka faylka la tirtiray ka bin recycle ku processor dhab ahaan waa inuu xaqiijiyo in tixraaca ee file waxaa sidoo kale la tirtiro iyo sabab la mid ah, ma ay arki karo in ay user oo aan isticmaalka qalabka sare in la qaadi karaa si loo hubiyo in sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah tahay natiijada laga helo iyo files in lagu tirtiray bin recycle waxaa lagu soo celiyo. Files Intaas oo dhan xaqiiqadii waxay yihiin arrintan la xiriira ilaa xogta ma aha overwritten oo ku laawe afka ka dhigan tahay in barnaamij cusub oo aan ku rakiban. Kiiskan Haddii markaas dhacdo user waa in aan marnaba la awoodo inuu ka soo kabsado xogta iyo sabab la mid ah waxaa sidoo kale in la xusay in user wuxuu hubinayaa in in ugu fiican iyo farsamo ugu horumarsan waxaa loo isticmaalaa taas oo shaki bixi laheyd ka dhowr dollars waa dhowr kun oo doolar. Si kastaba ha ahaatee faylasha xaqiiqo ah waxay yihiin.
Sidee inuu ka soo kabsado files tirtiray ka card SD si degdeg ah oo ammaan ah?
Wondershare Data Recovery waa ugu fiican iyo barnaamijka ugu horumarsan oo loo isticmaali karo si loo hubiyo in xogta la soo celiyo oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Sidoo kale waa in la ogaadaa in ay ku dhiirigelinayaan in barnaamijka ayaa xaqiijiyey in arrin ku saabsan xog waa sii raagayaan oo waxaa laga codsadaa in samaynta barnaamijkan. Sidaas awgeed waa in sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay in user a waa in ay isticmaalaan si ay u hubiyaan in xogta la soo kabsaday. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in aad hesho natiijo ugu wanaagsan ee geedi socodka la xiriira ee qaybtii dambe ee tutorial lagu dabaqo habka ugu fiican. Waxa kale oo hubin doona in user helo Screenshot ka gundhig in gargaarana lahaa wadadii ugu wanaagsaneyd ee ay computer ama qalabka oo u baahan in dib u soo celinta xog ah. Si aad u heshid waxa ugu fiican oo gobolka ka mid ah tahay natiijada waxaa sidoo kale lagula talinayaa inay raadsadaan kaalmo ka online Wondershare Data Recovery forums halkaas oo khubaro mar walba yihiin online oo hagaya dadka isticmaala ku.
Noocyada file taageerayaan barnaamijkan
Liiska file waa sida soo socota u ogolaanaya user si aad u hesho natiijada ugu fiican:
Xaaladaha ay taageerayaan barnaamijkan
Ka dib markii qaar ka mid ah xaaladaha waxaa taageera barnaamijka iyo khasaaradan xogta ay sabab u tahay mid ka mid ah kuwa hoos ku xusan la soo celin karin si fudud:
Sababo kala duwan ah
Khasaaraha file Shil.
Isticmaalka Wondershare Data Recovery ah
1. URL ayaa http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html waa in ay soo booqdaan in barnaamijka lagu rakibay oo bilaabay:
2. In talaabada labaad user ay u baahan tahay in la hubiyo in nooca file la soo xulay in ay tahay in la soo celiyo:
3. Meesha ay file waa in markaas la cayimay mid kastaba:
4. files soo celiyo markaas waa in la soo kabsaday sida rabitaan:
Sida looga hortago SD xogta card khasaaro
Ka dib markii qaar ka mid ah talooyin kaa caawin karta user si looga hortago in xogta khasaaro card SD ah:
1. baytariyada qalabka waa in si buuxda loo soo oogay ka hor inta suuqa kala iibsiga xogta nooc kasta oo ay tahay in la sameeyo.
2. Haddii faylasha iyo fayl kaarka furan yihiin gal nidaamka oo waa inuusan marna waa in laga qaado aqriyaha kaarka.
3. dhaqdhaqaaqa File gudahood kaarka waa in aan marnaba la sameeyo haddii waxyaabaha ku furan yihiin gal nidaamka sida galiya kaarka si xun u samaynta waa irrecoverable mararka qaarkood.
> Resource > Memory Card > Sidee inuu ka soo kabsado files tirtiray ka card SD si degdeg ah oo ammaan ah